Yini okufanele uyibone futhi uyenze edolobheni laseBrussels I | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | EBrussels, General
IBrussels ngelinye lalawo madolobha aseYurophu bafanelwe ukubaleka. Kuyaziwa ngekhwalithi koshokholethi bayo nobhiya, kepha inhlokodolobha yaseBelgium ingaphezulu kakhulu, idolobha elinezindawo zomlando nezanamuhla nezindawo eziningi ongazivakashela.
Uma ufuna ukwazi ongakubona nokwenzayo edolobheni laseBrussels, sineziphakamiso ezimbalwa kuwe. Kusukela ekuboneni iManneken Pis enobungane kuya esigodlweni esihle saseRoyal. Inani elikhulu leziphakamiso zokujabulela inhlokodolobha enikeza okuningi kubavakashi abafuna ukuyazi.
1 IManneken Pis
2 Indawo enhle
4 Isonto lombhishobhi laseBrussels
5 I-Royal Palace
6 I-Galleries Saint Hubert
Noma kungabonakala kungajwayelekile, lesi sibalo se- umfana uyachama Ingenye yezimpawu ezithandwa kakhulu edolobheni laseBrussels. Kusuka ngekhulu le-XNUMX, noma lokhu esikubonayo namuhla kuyikhophi yoqobo, eyebiwe isela. Kukhona izinganekwane eziningi nezinhlobonhlobo ezizungeze ukwenziwa kwalesi sithombe esincane, njengokuthi senziwe ngokuhlonipha ingane eyacisha umlilo ngale ndlela yasekuqaleni. Yiba noma kanjani, namuhla kuyisithombe okufanele uvakashele kuso, ngoba sekuvele kuyingxenye yomlando wedolobha.
Uma sithanda amafonti, singafuna futhi ukubona ifayela le- Jeanneke pis, isifanekiso sentombazane esifana nesesifazane. Kusuka ngekhulu lama-XNUMX, futhi itholakala kolunye uhlangothi ebangeni elifanayo ukusuka eGreat Place. Akuvusi intshisekelo engaka kodwa kwabaningi kungaba yinto ethakazelisa kakhulu.
IGreat Place noma iGrote Mark yi- IGreat Square yedolobha laseBrussels. Umongo wendawo enomlando, lapho ungabona khona izakhiwo ezinhle ezindala nalapho ungathola khona ihholo ledolobha. Lesi sikwele siyinkimbinkimbi yokwakhiwa kwekhulu le-XNUMX futhi singesinye sezikwele ezinhle kakhulu kulo lonke elaseYurophu. Cishe zonke kwakumele zakhiwe kabusha emakhulwini eminyaka adlule, ngaphandle kwehholo ledolobha. IHotel de Ville iyisakhiwo esidala kunazo zonke esigcawini futhi imele kakhulu kangangokuba kwenziwa izinkambo eziqondiswayo. Sithola noLe Pigeon, ikhaya likaVictor Hugo ngesikhathi edingisiwe. Uma sifuna ukuthuthukisa inhlanhla yethu, ngakwesokunxele sehholo ledolobha kunesithombe sika-Everad't Serclaes, okumele sithinte kuso ingalo ngoba siletha inhlanhla.
Uma sicabanga ngeBrussels, i-Atomium, eyenzelwe i- Ukuchazwa kwendawo yonke nokuthi yize kwagxekwa kakhulu ngaleso sikhathi sekuwuphawu lomuzi. Lesi sakhiwo simele i-athomu elikhuliswe ngosayizi, futhi into ethokozisayo ukuthi ngaphakathi kwendima ngayinye kunemibukiso yesikhashana futhi amashubhu ayijoyinayo anama-escalator okusuka kwelinye aye kwelinye. Engxenyeni engenhla kunendawo yokudlela yokuphumula, yize kumele siye ngesineke ngoba ukuba wuphawu lwedolobha, ulayini ujwayele ukwakha ukubona ingaphakathi.
Isonto lombhishobhi laseBrussels
ICathhedral yaseBrussels noma USan Miguel noSanta Gúdula Kuyisakhiwo esihle sesitayela seGothic esiqale ngekhulu le-XNUMX. Ingaphakathi le-cathedral lihle kakhulu kepha lisangulukile kakhulu kunalokho kufanele ngoba likhuthazile ukuphangwa okuningana. Amafasitela awo amahle anengilazi noma ipulpiti eliyibharoque eliqoshwe ngokhuni liyabonakala. Isitho esikhulu se-cathedral naso siyabukeka. Ukuvakasha okuqondiswayo kungenziwa futhi kungenye yokuvakashelwa okubalulekile edolobheni.
IRoyal Palace iyisakhiwo esimangalisayo esiseduze neBrussels Park. A Isakhiwo sekhulu le-XNUMX namuhla okuyisihlalo sobukhosi baseBelgium. Kuyo kuneminyango kanye namahhovisi asebukhosini. Yindawo lapho kubanjelwa khona imicimbi esemthethweni ebaluleke kakhulu, yingakho benamakamelo emicimbi ebanzi nenhle. Kulezi zinsuku ukuvakashelwa esigodlweni kungenziwa kusuka ngoJulayi kuya kuSepthemba, lapho kungekho msebenzi omningi ngaphakathi, ngakho-ke uma sifuna ukubona ingaphakathi lalo ukuthola umbono ngempilo yesigodlo samanje, kungcono ukhethe uhambo kulezi zinyanga.
I-Galleries Saint Hubert
Lezi ezokuqala zemibukiso yezentengiso lezo zadalwa eYurophu. Zitholakala eduze kweGrand Place futhi kuyigalari enhle egcina leyo ntelezi nenhle. Kuyo ungabona zonke izinhlobo zezitolo namawindi ezitolo agcinwe kahle, anezitolo zikashokoledi, izitolo zikanokusho noma ama-jeweler. Kukhona nezindawo zokudlela, amathilomu kanye nebhayisikobho. Ngaphandle kokungabaza, kuyindawo ekahle yokuchitha amahora uma usuku lungalungile ngaphandle, ngoba lumbozwe ngodome lwengilazi oluvikela futhi oluletha ukucaca. Namuhla kuphela yimibukiso emithathu emboziwe egcinwe edolobheni, okubaluleke kakhulu kuyo yiSaint Hubert Gallery.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Yini okufanele uyibone futhi uyenze edolobheni laseBrussels I